Abantu abangadatshukelwa ngoba bengabesifazane | News24
Cape Town - Ngenxa yenhlabamkhosi ehlonzwe uhulumeni kanye nabalwela amalungelo abantu, kuningi ukuxhaphazeka okubhekene nabantu besifazane osekuhlale obala wena owabona impahla yembuzi.
Lesandla sokuphatha abantu besifazane ntofo-ntofo sesigcine sahluma isihlava sokubenzelela nalapho kungekho sidingo khona.
Omunye umngani wami wesifazane usanda kukhala ngobudedengu bomshayeli webhasi omshiye emile esitobhini kusempondozankomo. Lo mngani wami ugcizelela lento yokudatshukelwa kwabantu besifazane kulesi sikhalo sakhe uthi “umshiya kanjani umuntu wesifazane emi yedwa esitobhini sebhasi kusemnyama”…yimihlola kaJames!
Yingoba benjani abantu besifazane, bakhubazekile?
Kubi ukushiya umuntu emi yedwa ebumnyameni angikhathali kungaba yindoda kumbe owesifazane, abantu esikhundleni sokulwa nesihlava sobudedengu nokunganakekelani kwabantu bagxisha udaba lobulili.
Athi umuntu “hayi bo akashaywa umuntu wesifazane”…ungazodlala la wena, ubani okumele ashaywe, yindoda? Akukuhle ukushaywa komuntu noma ngabe yindoda noma owesifazane noma ngabe isitabane.
Abantu mabazifundise ububele nokunakekelana ngaphandle kokufaka ubulili kulokho.
Ubabomncane wami wayeshayela amaloli, uthi ngelinye ilanga ebusuku emgwaqweni onguthelawayeka onyukelayo lapho iloli lakhe lincenga kancane, abone owesifazane eceleni komgwaqo amumise, ayikhwebule iloli emela lona wesifazane.
Uthe emvulela isicabha ngakwesobunxele kwakukhala esakhe (umshayeli) isicabha sezi-la izinsizwa zamkhomba ngenhlokohlela zamehlisa phansi zamshiya enqunu, zalibasa iloli naye lo wesifazane osetshenziswe njengodobo ukuthithibeza ingqondo yomshayeli.
Ubugebengu bubi noma ngabe benziwe ngubani, kodwa lokho akungasivimbi ukusiza abantu lasibona kuphephile khona. Makungadatshukelwa abantu besifazane begcine sebenzelelwa ezintweni eziningi.
Kepha la inhliziyo yakho nonembeza wakho ukuvumela ukwelula isandla ungakusebenzisi ukuthi “ngenza ngoba kungowesifazane” ngoba wohlangabezana nembibizane.